iPhone 6s Plus Hanjaka amin'ny varotra finday ve i Apple? | Androidsis
iPhone 6s Plus Hanjaka amin'ny varotra finday ve i Apple?
Cristina Torres sary placeholder | | About us
Apple dia nanambara tamin'ny hetsika nataony omaly hoe inona ilay saga iPhone vaovao. Ireo no maodely iPhone 6s sy iPhone 6s Plus. Amin'ny tranga iray lehibe indrindra, izy no andiany faharoa amin'ny phablets izay atolotry ny orinasa paoma eny an-tsena ary miaraka amin'ireo fiasa izay miaraka aminy, mety ho mpifaninana ny mifanandrify amin'ireo terminal Android efa misy. Na dia tsy misy fanatsarana lehibe aza ny famolavolana, izay mijanona ho tsy mizaha maso fotsiny, mba hahitana izay afaka manome ny finday ny tombony amin'ny fifaninanana tokony hidiranao ao anatiny. te jereo ny iPhone 6s Plus ao anatiny?
Ity misy latabatra misy ny lehibe Fandraisana iPhone 6s Plus hahafahanao mampitahanao izany amin'ny atolotry ny terminal hafa eo amin'ny tsena Android. Na izany na tsy izany dia jereo hatrany ny Androidsis satria amin'ity andro ity dia hamoaka fanadihadiana azo ampitahaina amin'ireo terminal lehibe eny an-tsena izahay. Aza adino izy ireo!
1 Endri-javatra amin'ny iPhone 6s Plus
2 iPhone 6s Plus: Fanjakan'i Apple
Endri-javatra amin'ny iPhone 6s Plus
modely iPhone 6s Plus
efijery 5.5 santimetatra
ram 2GB (tombanana)
Tahiry anatiny avy amin'ny 16GB
Fakan-tsary aoriana 12MP
Fakan-tsary aloha 5MP
Conectividad LTE nohatsaraina sy WiFi lavitra kokoa
Fitaovana hafa Aluminium vaovao ao amin'ny trano. Fanatsarana ny fakan-tsary sy fisian'ny volamena
bateria Tsy misy fampahalalana
lanja Tsy misy fampahalalana
vidiny Avy amin'ny 709 euro any Eropa
iPhone 6s Plus: Fanjakan'i Apple
Anisan'ireo fatiantoka hitantsika Fandraisana iPhone 6s Plus efa naseho, tokony homarihina fa ny fahatsiarovana RAM dia tsy ho ny haben'ny mahazatra atolotry ny terminal avo lenta amin'ny tsena Android. Inona koa, na dia mbola tsy fantatra aza ny angon-drakitra, dia mety ho ao amin'ny 2GB izany. Na izany aza, amin'ny fihazakazahana miaraka amin'ireo singa samihafa sy rafi-pandaminana samihafa dia tsy tokony ho fahitana fatiantoka izany. Fa ilaina ny manonona, indrindra ho an'ireo izay mampitaha isa eo anelanelan'ny terminal A sy ny B hafa ary, avy eo, mandray ny fanapahan-kevitra.
Etsy ankilany, ho an'ireo izay efa manana iPhone, toy ny nitranga matetika tao amin'ireo kinova antonony dia tsy misy fiovana lehibe. Ny casing dia vita amin'ny fitaovana hafa, mahazaka kokoa, saingy zara raha tsikaritry ny maso mitanjaka. Ny hany misongadina amin'ny resaka famolavolana dia ny loko hatramin'ny iPhone 6s Plus no voalohany manolotra loko mavokely. Mazava fa vonona ny handresy ny mpihaino vehivavy i Apple, ary mety namely ny fantsika teo amin'ny lohany izany.
Ny fanatsarana niavaka indrindra izay efa nitalahoany dia ilay mifandray amin'ny fakantsary. Ny iPhone 6s Plus dia manolotra fakantsary namboarina amin'izay atolotray amin'ireo fiasa hafa. Fa ho setrin'izany, noho ny ady vola, hitantsika fa tena ambony ny vidiny raha ampitahaina amin'ny atolotry ny tsena. Mazava ho azy, efa zatra izany ny vahoaka Apple ary tsy nanjary olana ny amin'ny fitohizan'ny varotra.
Amin'izany rehetra izany dia mino aho fa namorona terminal i Apple ny tompona iPhone amin'izao fotoana izao dia manolotra azy ireo fanatsarana afaka manonitra azy ireo raha toa ka tena ankizilahy mpankafy. Mandritra izany fotoana izany dia mamirapiratra amin'ny mpijery vehivavy miaraka amin'ny loko mavokely izy, ary manala ny volamena amin'ireo maodely hafa mba hahatonga azy io ho loko manokana ho an'ny iPhone 6s Plus sy ny mpiara-miasa aminy kely kokoa. Miaraka amin'ireo paikady rehetra ireo dia heveriko fa avo ny varotra iPhone vaovao.
- Tombony anaty tsara kokoa
- Misy loko vaovao
- Fakan-tsary misy fiasa maro ary nohatsaraina ny vahaolana
- Be loatra ny vidiny any Eropa
- Tsy misy fanovana kosmetika lehibe
- Ny fahatsiarovana RAM araky ny tsena dia tsy ampoizina
Famerenana ny: Cristina Torres sary placeholder
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » iPhone 6s Plus Hanjaka amin'ny varotra finday ve i Apple?
Alberto Estefania Biedma dia hoy izy:
Toy ny lahatsoratrao io .... tsy maninona, mampanantena ianao amin'ny lohateny ary avy eo tsy misy afa-tsy setroka
Valiny tamin'i Alberto Estefania Biedma
Fampitahana: Apple iPhone 6s Plus VS Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy S7, tsaho voalohany momba ny fampisehoana azy sy ny pitsopitsony ara-teknika